iPhone Ringtone Converter-Beddelaan Video inay iPhone Ringtone (iPhone5 ka mid ahaa
> Resource > iPhone > iPhone Ringtone Converter: Beddelaan Video inay iPhone Ringtone (iPhone 5 ka mid ah)
Wondershare IPhone Ringtone Converter waa awood iPhone Ringtone Converter Software si loogu badalo ringtones kuu gaar ah u iPhone 5 / iPhone cusub 4 / iPhne 4s / iPhone 3G / iPhone 3GS. Waxaa loogu badalo kartaa wixii Video / files Audio (oo ay ku jiraan AVI, wmv, MPEG, MOV, FLV, MKV, dhexena, XviD, MP4, H.264 / AVC, AVCHD, .DAT, 3GP, VOB, WMA, regelingen, RA, M4A iyo MP3) si iPhone M4R ringtone.
1 Load video / files audio in tani ringtone Converter iPhone
Free download iPhone Ringtone Converter, rakibi oo abuurtaan. Ka dib markii in, waxaad leedahay laba siyaabood oo kala duwan si ay u dajiyaan files barnaamijkan. Guji ka button inay dajiyaan faylasha aad u doonayay iPhone ringtone qaadashada. Ama jiidi oo hoos u files si app this Macdan music aad ugu jeceshahay.
2 Dooro sida qaab wax soo saarka M4R
Waxa aynnu og nahay, Apple iPhone isticmaalaa MPEG 4-maqal ah oo loogu ringtones, iyo kordhinta faylka .m4r yahay. Sidaas halkan, waxaan u bedeli karaan video / audio in qaab M4R iyo dhererka waa in uu noqdaa in aan ka badnayn 30.
Guji mid ka mid file in shayga saxaarad bidix, u tag "Edit"> "jar" inay galaan suuqa kala tafatirka, hoos bar horumarka, siday u kala horreeyaan jiidi oo hoos u labada blocks slide u deji waqtiga bilowga iyo dhammaadka. Hubi dhererka ma aha in ka badan 30meeyo. Markaas riix icon maqas-sida, guji "ok". Isla markiiba, faylka clip cusub oo lagu sidoo kale ku qoran kartaa shayga saxaarad bidix.
Hadda, furo liiska hoos-hoos qaab wax soo saarka, oo waxaad u tagtaan "qaab"> "audio"> "M4R".
3 Beddelaan files si iPhone M4R ringtone
Waxa ugu dambeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in guji "Beddelaan" button ee geeska midig ugu hooseysa tani iPhone Ringtone Converter ah. Bal eeg, app tani waxaa diinta files si iPhone files ringtone. Markii diinta lagu sameeyo, dajiyaan files wax soo saarka si ay u Lugood iyo markaas iyaga u hagaagsan in iPhone (iPhone 5 taageeray). Ma heli karaa faylasha la gediyay M4R? Just riix "Open Folder" in interface ah si aad uga hesho.
Features Key ee Wondershare iPhone Ringtone Converter
Beddelaan video / files audio si iPhone ringtone
Beddelaan ringtones ee cusub iPhone5 \_ iPhone 4 \_ iPhone 4s \_ iPhone 3G \_ iPhone 3GS \_ iPhone 4G \_ iPhone 4GS.
Waraaqda M4R iPhone ringtone ka file video kasta.
Beddelaan ku dhowaad dhammaan qaabab audio si iPhone M4R ringtone.
Qabtaan iPhone ringtone diinta si fudud, si deg deg ah, oo wax ku ool ah.
Jar iyagaa midkood ah ee video ama audio files u ringtones iPhone.
Si fudud dhigay markii bilowgii iyo dhammaadka wakhtiga si dhab ah Macdan aad clip doonayo in uu la kulmo iPhone file size ringtone.